Ch 21 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 21 John
21:1 Rehefa afaka izany,, Jesosy dia niseho indray tamin'ny mpianatra teo amin'ny Ranomasin'i Tiberiasy. Ary niseho tamin'ny fomba izany.
21:2 Ireo niara-: Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe ny Twin, ary Natanaela, izay avy tany Kana any Galilia, ary ny zanak'i Zebedio, ary ny roa hafa ny mpianany.
21:3 Simona Petera hoy izy taminy, "Handeha hanarato aho." Dia hoy ireo taminy, "Ary izahay no miara-mandeha aminao." Dia lasa niakatra tao an-tsambokely. Ary amin'izany alina, dia tsy nahazo na inona na inona.
21:4 Fa nony maraina tonga, Jesosy dia nitsangana teo amoron-dranomasina. Anefa ny mpianatra tsy tonga saina fa i Jesosy.
21:5 Dia hoy i Jesoa taminy, "Children, no manan-kanina?"Ary ireo namaly Azy, "Tsia"
21:6 Ary hoy izy taminy, "Alatsaho ny harato amin'ny ankavanan'ny sambokely, dia hahita ny sasany. "Koa, dia esory hiala, ary avy eo izy tsy zakany nakarina ao amin'ny, noho ny habetsahan'ny trondro.
21:7 Noho izany, ny mpianatra izay tian'i Jesosy tamin'i Petera, "Izany dia ny Tompo." Simona Petera, rehefa nandre fa ny Tompo, nisikinany ny akanjo manodidina ny tenany, (fa tsy niakanjo izy) ary rehefa natsipiny teo amin'ny ranomasina.
21:8 Ary ny mpianatra sasany tonga in-tsambokely, (fa tsy lavitra ny tany, ihany no tokony ho roan-jato hakiho) nisarika ny harato miaraka amin'ny trondro.
21:9 Avy eo, raha nananika nidina ho any amin'ny tany izy, dia nahita vainafo voaomana, ary ny trondro efa napetraka etsy ambony ireo, ary ny mofo.
21:10 Hoy Jesosy taminy:, "Itondray ny hazandrano izay ianao vao tratra izao."
21:11 Simona Petera ka nosarihany nananika ny fandrika harato-tanety: feno hazandrano lehibe, dia dimam-polo amby zato-telo tamin'izy ireo. Ary na dia nisy maro, ny harato dia tsy rovitra.
21:12 Hoy Jesosy taminy:, "Hanatonana hisakafo." Ary tsy hisy anankiray aminy nipetraka hihinana sahy nanontany Azy, "Iza ianao?"Fa fantany fa ny Tompo.
21:13 Ary Jesosy nanatona, Ary nandray mofo Izy, ka dia nomeny azy ireo, ary toy izany koa ny trondro.
21:14 Izany no fanintelon'ny fa i Jesosy dia niseho tamin'ny mpianany, rehefa natsangana tamin'ny maty.
21:15 Avy eo, rehefa nisakafo izy, Hoy Jesosy tamin'i Simona Petera, "Simon, zanak'i Jaona, no tia Ahy mihoatra noho ny?"Ary hoy izy taminy, "Eny, Tompo, fantatrao fa tiako ianao. "Ary hoy izy taminy, "Fahano ary ny ondrikeliko."
21:16 Ary hoy Izy taminy indray: "Simon, zanak'i Jaona, tia ahy ve ianao?"Ary hoy izy taminy, "Eny, Tompo, fantatrao fa tiako ianao. "Ary hoy izy taminy, "Fahano ary ny ondrikeliko."
21:17 Ary hoy izy taminy fanintelony, "Simon, zanak'i Jaona, tia ahy ve ianao?"Tena nalahelo i Petera fa efa nanontany azy fanintelony, "Tia ahy ve ianao?"Ary noho izany dia hoy izy taminy: "Tompo ô, ianao mahalala ny zavatra rehetra. Hianao mahalala fa tia anao aho. "Ary hoy izy taminy, "Fahano ny ondriko.
21:18 Amen, amena, Lazaiko aminareo, fony ianao mbola tanora, ianao hisikina ny tenanao, ary nandeha na aiza na aiza tianao. Fa raha be taona ianao, dia hanitatra ny tananao, Ary ny anankiray koa misikìna, ary hitondra anao amin'izay tsy tianao haleha. "
21:19 Ary izy no nilaza izany mba hidika izay karazana fahafatesana izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany, hoy izy taminy:, "Araho aho."
21:20 Peter, mihodina manodidina, nahita ny mpianatra izay tian'i Jesosy manaraka, ny izay ihany koa dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoana ka nanao hoe:, "Tompo ô, iza no iza no hamadika anao?"
21:21 Noho izany, rehefa nahita azy Petera,, dia hoy izy tamin'i Jesosy, "Tompo ô, fa ahoana ny momba ity iray ity?"
21:22 Fa hoy Jesosy taminy: "Raha tiako hitoetra izy mandra-piveriko, Inona no soa tokony ho anareo? Fa manaraha ahy hianao. "
21:23 Noho izany, ny teny nivoaka teo amin'ny rahalahy fa tsy ho faty mpianatra. Fa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty, afa-tsy, "Raha tiako hitoetra izy mandra-piveriko, Inona no soa tokony ho anareo?"
21:24 Izany no mpianatra ihany izay manolotra fijoroana ho vavolombelona momba ireo zavatra ireo, ary iza no nanoratra ireo zavatra ireo. Ary fantatsika fa marina ny fanambarany.
21:25 Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, izay, raha toa ka ny tsirairay amin'ireo dia nosoratana teo, izao tontolo izao aza, Angamba hoe aho, dia tsy ho afaka ny omby ny boky ho voasoratra.